Ahoana no tokony hataon'ny olona voan'ny aretim-po? - Ne gerekir?
voavahaFomba fijery 6.16K 30 / 12 / 2021 Mamaly ny fanontanianao rehetra momba ny fahasalamana eto izahay! Manana dokotera manana mari-pankasitrahana avy amin'ny birao izahay hamaly fanontaniana ara-pitsaboana mba hahazoanao ny fikarakarana ilainao.
Salama. Vao haingana aho no voan'ny aretim-po. Azonao atao ve ny manampy ahy hahita ny fomba tokony hanomezana sakafo ahy?
Dr. Dilan Çöçelli45 Navoaka tamin'ny 04/06/2021
Voalohany, salama haingana.
Ny aretim-po dia aretina izay mitranga amin'ny fanaintainan'ny tratra mafy vokatry ny tsy fahampiana ny ampahany mifandraika amin'ny hozatry ny fo noho ny tsy fahafahan'ny ampahany mifandraika amin'ny hozatra fo homena sakafo ary ny tsy fahampian'ny oksizena aorian'ny korontana ao amin'ny lalan-dra. ny fo, ary azo atao ny miteraka fahafatesana.
Arteria: Azonao atao ny mihevitra azy ho sampana voalohany amin'ny aorta, ilay fanaka lehibe indrindra manaparitaka ra avy amin'ny fo mankany amin'ny vatana iray manontolo.
Zava-dehibe ny fotoana tsy hisarahan'ny fony aorian'ny krizy, ny haben'ny fanakanana ao am-po, ny fahasimbany ary ny fiantraikan'ny fo amin'ity fanakanana ity. Aorian'ity fizotrany ity dia ilaina ny manova fomba fiainana. Tokony manatona ny dokoteranao ianao ary miroso manaraka ny tolo-keviny.
Tsy tokony hirotoroto ianao. Tsy maintsy omenao fotoana hialana sasatra ny fonao, ny fanahinao ary ny vatanao. Aza hadino ny mifanakalo hevitra amin'ny dokoteranao rehefa miverina mihetsika ianao, ny fomba hampihenana ny enta-mavesatra amin'ny fo, raha mila manova asa ianao, ary misy fanontaniana hafa mety hipoitra tampoka.
Raha tsy mandeha ireo olana tokony hodinihina aorian'ny aretim-po, dia tena azo atao ny manafika fo indray. Satria ny atherosclerosis, izay miteraka aretim-po, dia aretina mandritra ny andro iray.
Inona no mahatonga ny aretim-po?
⚠️ Firaisana ara-pirazanana
⚠️ fiakaran'ny tosidrà
⚠️ fifohana sigara
⚠️ Ny lanja be loatra
⚠️ Sakafo tsy mahasalama
Raha tsy hoe esorinao hiala amin'ny fiainanao izy ireo dia hitohy ny loza mety hitranga amin'ny aretim-po vaovao. Ireo antony ireo dia mila tsaboina amin'ny fomba mandaitra mba tsy hiverimberenana. Ny aretim-po indray dia mety hampidi-doza kokoa ary hahafaty ny fo simba.
Tokony hanova ny sakafonao ianao
Ny fanovana sakafo dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana faharoa.
✔️ Voankazo sy legioma bebe kokoa
✔️ Trondro 2 fikasana isan-kerinandro
✔️ Vorona akoho tsy misy hoditra
✔️ Ny voanjo sy ny legume
✔️ Voamaina iray manontolo
✔️ fihinanana sakafo vita amin'ny menaka oliva
✔️ vokatra ronono ambany tavy
✔️ Atody 5-6 isan-kerinandro
Hamarino tsara fa feno legioma isan-karazany ny takelakao. Ny legioma sy voankazo am-bifotsy sy mangatsiaka dia azo ampiasaina raha mbola tsy misy sira sy siramamy.
Inona no hialana amin'ny ankapobeny
Aza mihinana siramamy, sira ary tavy mahasalama be loatra. Tokony ferana ny tavy mahavoky ary mandrara tanteraka ny tenanao amin'ny tavy trans.
❌ Fihoarana tafahoatra, miotrika
❌ Sakafo fastfood isan-karazany
❌ Sakafo nendasina na dia voaomana ao an-trano aza
❌ sira, siramamy
❌ Sakafo am-bifotsy misy sira na siramamy
❌ Sakafo Snacks toy ny chips, cookies, ice cream
❌ sakafo vonona mangatsiaka
❌ Mofomamy sy mofomamy
At Hena (voafetra)
❌ Alikaola, sigara
Oils Menaka legioma misy hydrogène (tavy trans)
Trondro roa andiany roa no tokony hohanina isan-kerinandro. Ny trondro dia iray amin'ny sakafo tsara indrindra ho an'ny fo, saingy mila misafidy ireo karazana mety ianao.
Ireo rehetra ireo dia trondro manan-karena amin'ny Omega-3. Izy io no heverina ho tsara indrindra satria misy asidra matavy Omega-3 izay mampihena ny kolesterola sy manatsara ny fahasalaman'ny lalan-dra.
Fero ny 1.500 mg na latsaka ny fanjifanao sodium isan'andro mba hifehezana ny tosidra.
Ny zava-pisotro mahasoa indrindra dia ny rano foana. Anontanio ny dokotera raha afaka misotro dite sy kafe ianao. Na inona na inona izany dia tokony hosotroinao izy ireo nefa tsy asiana crème, vovo-dronono ary siramamy.
Ankoatry ny sakafo mahavelona, ​​ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny fo.
Rehefa avy niala sasatra tsara ianao dia tokony hampihatra ny mandeha, manao fanatanjahan-tena ary manitatra hetsika mandritra ny adiny iray isan'andro, raha toa ka tsy mavesatra izany.
Ny fahaverezan-danja loatra dia mametraka adin-tsaina tsy ilaina amin'ny fo. Ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena dia hanampy anao hihena. Na izany aza, amin'ny tranga sasany dia tsy ampy izany. Ny lanja mihoatra ny lanjany dia mety ho ny tendron'ny iceberg ihany. Miresaha amin'ny dokotera momba ny dingana tokony hataonao hiatrehana izany.
Ny fihenjanana dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny fonao. Ampio hampihena ny adin-tsaina amin'ny teknika misaintsaina na mifehy tena.
Miala amin'ny sigara sy mametra ny alikaola
Ny alikaola dia manadio ny ra, noho izany dia tokony hohanina amin'ny antonony raha voan'ny aretim-po ianao. Ny fifohana sigara dia tsy manimba ny fonao ihany koa. Fantatrao fa misy antony maro handaozana azy.
Karazan-tsakafo ho an'ny fo salama
Raha manapa-kevitra ny hihinana sakafo ianao dia manatona ny dokoteranao aloha. Tsy ny karazan-tsakafo rehetra no mety amin'ny fonao.
Misafidiana iray izay mampitombo ny fihinanana legioma, voankazo ary voamaina; misy vokatra vita amin'ny ronono ambany tavy, akoho amam-borona, trondro, legioma, menaka legioma tsy tropikaly ary voanjo; ferana ny fihinanana zava-mamy, zava-pisotro mamy ary hena mena. Mba hihazonana lanja mahasalama dia atambaro ny sakafo sy ny fikolokoloana ara-batana handoroana kaloria betsaka araka izay laninao.
➜ DASH (Sakafo haingana)
Izy io dia sakafo natao hampihenana ny tosidra. Toy ny sakafo Mediteraneana, mifantoka amin'ny hena mahia sy ny sakafo miorina amin'ny zavamaniry izy io.
Ny tena maha samy hafa azy amin'ny sakafo hafa: DASH dia mikendry ny hampihena ny sôdiana amin'ny sakafonao.
Inona no azo lanina
‌ ###️ legioma
‌ ###️ Voankazo
‌ ###️ Voamaina iray manontolo
‌ ###️ vokatra ronono ambany na matavy ambany,
✔️ ‌ Voanjo
✔️ ‌ Menaka azo alaina
Tsy ho ringana izy ireo
Meat ‌Ny hena
❌ ‌ vokatra vita amin'ny ronono sy voanio, daty
Oils ‌ Menaka tropikaly, toy ny sakafo voahodina
Diet Sakafo Mediteraneana
Ny sakafo mediteraneana dia tsy mametra mivantana ny fihinanana sodium, fa afaka mampihena voajanahary ny fihinanana sodium noho ny habetsahan'ny sakafo zavamaniry.
Ity sakafo ity dia mifantoka amin'ny tavy mahasalama, menaka oliva, legioma, trondro ary voamaina, ary legioma sy voankazo vaovao. Ny vilia ronono sy hena dia tsy azo hanina indraindray.
Raha manapa-kevitra ny hampiditra vokatra vita amin'ny ronono ao anaty sakafo ianao dia tokony hisy tavy 1% na latsaka.
➜ Sakafo miorina amin'ny zavamaniry
Ity sakafo ity dia miteraka fihinanana hena farafaharatsiny. Miorina amin'ny voankazo sy legioma, serealy, legioma izy ireo. Ireo olona voan'ny aretim-po (lalan-drà sy lalan-dra) dia tsy asaina manaraka sakafo vegan na mihinan-dra mihitsy aza noho ny fihinanana vitamina B12 ambany. Ny piscatarian (olona tsy mihinana hena hafa ankoatry ny trondro) na sakafon'ny zavamaniry misy hena voafetra dia tsara.
Ny fihinanana sakafo zavamaniry betsaka kokoa dia mety hampidi-doza kokoa ny aretim-po, homamiadana, tapaka lalan-dra ary diabeta karazana 2.
Ny fihinanana hena kely kokoa dia midika koa hoe fihinana tavy sy kolesterola tsy dia feno.
Ireo pasketarian dia mijanona tsy mihinana hena nefa tsy miteraka tsy fahampiana vitamina B12, zinc, calcium, na proteinina. Amin'ny ankapobeny, ity sakafo ity dia mitovy amin'ny sakafo mediteraneanina. Nofo iray monja no tsy ampiarahiny. Hena trondro. Ahitana loharanon'ny asidra matavy Omega-3 ilainao amin'ny hazandranomasina.
✔️ Trondro rano velona sy ranomasina
✔️ Voa sy voana tanamasoandro
✔️ Ny voam-bary rehetra
✔️ vokatra vita amin'ny ronono
Tsy azo laniana izy ireo
❌ Hena biby ra mandriaka
➜ Sakafo sakafo madio
Ny fihinanana sakafo madio dia tsy sakafo ho azy fa fahazarana mihinana. Ny fitsipika dia ny fihinanana sakafo manontolo izay nampihena kely ny sakafo voahodina mba tsy hihena ny loko sy ny preservatives amin'ny latabatra fisakafoanana. Ny sakafo am-bifotsy sy mangatsiaka izay tsy misy sira sy siramamy dia ankana amin'ity fitsipika ity.
Ny maharatsy ny sakafo sakafo madio dia ny tsy maintsy mahandro sakafo betsaka any an-trano. Ao amin'ny trano fisakafoanana sy kafe dia tsy afaka misotro vera iray fotsiny ianao.
Ny sakafo fihinana madio dia hampihena ho azy ny sira, siramamy ary tavy mahavoky. Tena tsara ho an'ny fo raha manampy ny fameperana hena mena amin'ity sakafo ity ianao.
Ramatoa Nurten, mampita ny firariana tsara indrindra indray izahay. Manantena aho fa hikarakara tsara ny tenanao…
Nurten Argin naneho hevitra 07 / 06 / 2021
Misaotra betsaka, tsy nanantena valiny amin'ny antsipiriany momba ny fanontaniako aho. Misaotra betsaka anao nanazava ahy momba ny sakafo mahavelona.